Mutsva mufananidzo weiyo iPhone 7 yekuratidzira mhando | IPhone nhau
Mutsva mufananidzo weiyo iPhone 7 yekuratidzira mamodheru
Maawa makumi mana nemasere mushure ichaonekwa iyo yekutanga mifananidzo ye iPhone 7 yekuratidzira mamodheru Uye iyo iPhone 7 Plus mumwe mufananidzo waonekwa uchiratidza ina iPhone 7s, imwe muvara rimwe nerimwe mune yazvino modhi, iyo iPhone 6s, inowanikwa Mumufananidzo wakaonekwa Chipiri chapfuura takaona chimwe chinhu chisina kunyatsokwana: iyo iPhone 7 4.7-inch modhi yaive neringi inodzivirira kamera kana ruzivo rwese rwaburitswa parizvino ruchivimbisa kuti mhete yakadai haizovapo.
Mufananidzo uyo zvaonekwa nhasi, kuburikidza NoWhereElse (OnLeaks), inoratidza ina iPhone 7 kuburitswa iyo isisina iyo yambotaurwa mhete. Panzvimbo uye sezvakataurwa nerunyerekupe uye nekudonha, inenge iri nyaya yakaremara yenzvimbo iyoyo uye iyo inoumba chii chinotsiva ringi yesimbi irimo muiyo iPhone 6 uye iPhone 6s.
Yakawanda yakajeka iPhone 7 yekuratidzira mamodheru
Runyerekupe rwazvino rwakataura kuti Apple inotevera smartphone yaizosvika mune yakawanda yakasviba nzvimbo grey pane iripo mumamodheru aripo, asi iro "rinenge dema" grey harionekwe mumufananidzo wekare. Izvi zvinodzora mukana iwoyo chaizvo here? Kubva pakuona kwangu, kwete. Gore rakapera isu takaziva kuti kwaizove neiyo iPhone 6s mu rose goridhe nguva refu isati yatanga, asi kana ndikarangarira nemazvo, hatina kukwanisa kuona kuti iro chairo vara raitaridzika sei kusvika zuva rekutanga (kana nguva pfupi yapfuura) .
Chinoita kunge chinonyadzisa kwandiri ndechekuti panongova nemufananidzo mumwe chete uye hautiratidze ruboshwe rweiyo 7-inch iPhone 4.7. Iyo yekuratidzira modhi yeiyo iPhone 7 Plus haina switch yekuisa chishandiso pane mbeveve, chimwe chinhu icho pachezvangu chinoita senge chakaipa pfungwa kwandiri. Kune zvese zvimwe zvinhu, iyo chifananidzo hachiratidze chero chakakosha, iine kamera yakakura uye yakawanda kumucheto kupfuura iyo yeiyo iPhone 6s uye mitsara yema antenna chete pamusoro nepazasi pechigadzirwa.
Ini pachangu, tichifunga kuti ndinofarira dhizaini yeiyo iPhone 6, ndinofunga dhizaini yeiyo iPhone 7 ndizvo zvavanofanirwa kunge vakatangisa makore maviri apfuura, ndiko kuti, dhizaini imwe chete asi ine yakakwenenzverwa ruzivo. Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Mutsva mufananidzo weiyo iPhone 7 yekuratidzira mamodheru
Nei heck ari maantenna mabhendi asiri iwo akaenzana iwo edzimba? Rudzii rwe brainless rwakauya kwaari kuti avachenese?
Icho chinhu chakashata chinoratidzika kunge ngowani yekare yekushandura
Semazuva ese Apple iri kurova pamaonero evatengi vavo nekuti vane chokwadi chekuti kune variko mapenzi avo vanotenga zvigadzirwa zvavo zvinotyisa seiyi iPhone 7 kusvika rimwe zuva.
watchOS 3 inosanganisira chinhu chitsva chekugadzira mafoni ekukurumidza
Iyo iPhone 7 bhatiri inogona kuve 14% yakakura kupfuura yazvino iPhone 6s